Android: Codsiyada loo adeegsado Nidaamka Howlgalka Linux ee Mobilka | Laga soo bilaabo Linux
Android: Codsiyada loo adeegsado Nidaamka Howlgalka Linux ee Mobilka
Linux Post Ku Rakib | | GNU / Linux
Qofkasta oo jecel «Informática» had iyo jeer wuxuu ahaa dhibic soo jiidasho leh, awood u leh inuu gaaro heer kaamil ah«convergencia» o «universalización» u dhexeeya kala duwan «Plataformas de SW» qalab kasta. Taasi waa, gaaritaanka dhex ordo a «Sistema Operativo»mid ka duwan ama ugu yaraan codsiyadiisa. Taasna waxay ku qaadatay waqti kaamil ah «Tecnologías de emulación y virtualización», ama loo maro «Máquinas Virtuales» o «Contenedores».
Qaarkood maqaaladii hore ee Blog, waxaan sidoo kale aragnay sida isbeddelka iyo wax ku oolnimada lagu gaarayo a «Sistema Operativo» iskutallaab-isweydaarsi ama isku-dhafan, taasi waa, a «Sistema Operativo» nooc kasta oo Desktops, Laptops, Mobile Phones, Tablets, iyo qalab kale oo casri ah. Ahaanshaha, kiiskii ugu dambeeyay ee suurtagalka ah ee lagu yaqaan fagaaraha adduunka, ee ah Nidaamka Howlgalka ee Huawei, oo loo yaqaan Harmony OS. Si kastaba ha noqotee, qoraalkan waxaan diiradda saari doonnaa inaan si kooban uga faalloono Codsiyada hadda jira ee loo adeegsado a Nidaamka Howlgalka Linux on Mobile ah oo leh Android.
Anaga ahaan, «Usuarios de Linux», had iyo jeer waxay ahayd xiisaha iyo xitaa caqabad shaqsiyadeed iyo / ama bulsho, in la awoodo in la rakibo wax kasta «Distro Linux», ama kan aan jecel nahay ama midkayaga «Distro Linux» si toos ah qalabka mobilada ama kaniiniga, ama ugu yaraan ugu socod si habsocasho leh.
Arrinta labaad, oo inta badan aad uga fudud in loo ordo qof kasta oo aqoon yar ama dhexdhexaad ah, waa codsiyada soo socda ee aan hoos ku xusi doonno. Sidan oo kale, oo leh barnaamijyadan, oo lagu daray dhowr tallaabo oo fudud, ficil ahaan qof kastaa wuu isticmaali karaa, xaaladaha ugu fudud, qaar ka mid ah faa'iidooyinka qaar «Distros Linux» mobilka ama u rogi ku dhowaad kombiyuutar dhammaystiran adoo gebi ahaanba fulinaya qaar «Distro Linux».
1 Barnaamijyada Android si ay u socodsiiyaan Linux
1.1 Dhajiye Linux oo dhameystiran
1.1.1 Tallaabada 1
1.1.2 Tallaabada 2
1.1.3 Tallaabada 3
1.1.4 Talo soo jeedin
1.2.2 Tallaabada 1 - Laga soo bilaabo GNURoot
1.2.3 Tallaabada 2 - Laga soo bilaabo XServer
1.2.4 Tallaabada 3 - Laga soo bilaabo GNURoot
1.2.5 Tallaabada 4 - Laga soo bilaabo XServer
1.3 Dejinta Linux
1.3.2 Tallaabada 1 - Bixinta Linux
1.3.3 Tallaabada 2 - VNC Viewer
1.4 Dhulka Isticmaalaha
Barnaamijyada Android si ay u socodsiiyaan Linux
Dhajiye Linux oo dhameystiran
Dhajiye Linux oo dhameystiranwaa codsi rasmi ah oo ah «Android», waxaa laga heli karaa «Tienda de aplicaciones de Google para Android (Google Play Store)», markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo 5 September ee 2016, oo hadda ku jira nuqulkiisa 3.0 BETA oo loo heli karo«Android» version 4.0.3 iyo noocyada dambe.
Asal ahaan, waxay kuu ogolaaneysaa inaad rakibto a«Distro Linux»si buuxda uga dhex shaqeeya «Android», si sidan ah oo ay u shaqeyso si la mid ah haddii lagu rakibo kombuyuutar jirka ah. Sidaa darteed, haddii ay suurtagal tahay, haddii kumbuyuutar iyo jiir ay ku xirmi karaan mobilada, waa in la ogaado oo la aqoonsado «Distro Linux» oo si habsami leh u socod.
Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud. Laakiin, ka hor inta aanad bilaabin, waa inaad hawlgelisay «Depuración de USB», ku yaal gudaha «Opciones de desarrollo», of «Menú de ajustes» de «Android». Ka dib markii la rakibo oo la dilo, waa inaad riixdaa ikhtiyaarka «Install Guides» taas oo muujin doonta kuwa kala duwan «Distros Linux» oo ay taageerayaan aaladda aan adeegsanay, taas oo ku kala duwanaan doonta hadba nooca «Android» rakibay iyo processor qalab.
Kadib markaad doorato midkoodna, waa inaad gujisaa badhanka «Download Image», si aad u sii wadato xulashada cabirka isku mid ah, kuwa la heli karo, kuna dhammee adigoo riixaya badhanka. «From Sourceforge», si aad u soo dejiso «Distro Linux» laga soo xigtay websaydhka.
Xusuusnow, markaad dooraneyso cabirka «Distro Linux» Waa inaad rakibtaa, waa inaad tixgelisaa in cabirka la xulay ka sii weyn yahay, in ka sii dhammaystiran ayaa noqon doona Xulo kan ku habboon, oo ku saleysan booska bilaashka ah ee qalabkaaga laga heli karo. Haddii aad rabto tan ugu dhammaystiran, had iyo jeer dooro ikhtiyaarka «Download Large Image».
Si aad u isticmaasho «Complete Linux Installer» Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad horey u rakibtay 2 codsiyo waxtar u leh Remote Access iyo Call Terminal «VNCViewer App» y «Terminal App», kuwaas oo si toos ah loogu rakibay isla qaybta la yiraahdo «Page 2» ee codsiga la yiri.
Markaa markii la soo dejiyey oo laga furay «Distro Linux» la socota «Gestor de archivos» doorbidkaaga, dariiqa gaarka ah, doorbiday una «Tarjeta de Memoria SD» ugu yaraan 8 ama 16 GB, waxaa lagu tilmaamay «Complete Linux Installer» marinka ayaa la yidhi, iyada oo loo marayo badhanka loo yaqaan «Launch». In kastoo, hore qaybta loogu yeedhay «Settings» iyo wixii ku saabsan ikhtiyaarka la yiraahdo «Edit» arjiga waa in loo sheegaa wadada «Distro Linux» furmay.
Marka tallaabadani la dhammaystiro, buuxinta tallaabooyinka loo baahan yahay, waxaa lagama maarmaan ah in la riixo batoonka la yiraahdo «Start Linux» si toos ah loo bilaabo «Terminal App», taas oo na weydiin doonta haddii aan rabno inaan hubino feylka «Distro Linux» furmay. Tallaabada aan ka boodi karno, qorista «letra n» oo riixaya badhanka «Intro». Mararka qaar, «Complete Linux Installer» Markii lagu fuliyo waqtigan, waxay ku weydiineysaa inaad gasho eray sir ah koontada isticmaale iyo / ama tilmaam xallinta shaashadda qalabka.
Laga soo bilaabo halkan, iyo dhamaadka raritaanka «Distro Linux», xarriiq ayaa la socota tilmaamaha «root@localhost:/ #», taas oo tilmaamaysa in kaliya aan u baahanahay inaan marinno «GUI» isku mid ah iyada oo loo marayo «VNCViewer App», maadaama aanan toos u heli karin tan, maadaama ay tahay «Android», «Sistema Operativo» yaa horay u isticmaalaya «Entorno Gráfico» aaladda.
Sidaa darteed, si aan u dhammeyno waa inaan bilowno oo keliya «VNCViewer App» geli xuduudaha isku xidhka lagama maarmaanka ah kuwaas oo guud ahaan lagu soo koobay:
naaneys: Linux Distro username
Password: Furaha asalka ah ee isticmaale Linux Distro
Kadib, ku dhammee adigoo riixaya badhanka la yiraahdo «Connect» si midka la filayo u muuqdo «GUI» oo ka mid ah «Distro Linux». Haddii loo baahdo, waa la waayi lahaa haddii loo baahdo, dhagsii badhanka fursadaha «AndroidVNC» si loo habeeyo habka xakamaynta tilmaamaha, cabirka daaqada ama toobiyeyaasha kumbuyuutarka si loo hagaajiyo marin u helida «Distro Linux» ku saabsan «Android». Inta soo hartay, waxay kaliya u hartay isticmaalka «Distro Linux» ikhtiyaarka isticmaalaha.
Si aad uga faa'iidaysato «Complete Linux Installer» Linux Distros oo ku yimaada qaab toos ah ayaa lagula talinayaa iyo wax kasta oo suurtagal ah oo horeyba loo rakibay si haddii loo baahdo, ha rakibin. Talo bixin wanaagsan, marka laga hadlayo, waa DEBIAN, Ubuntu, MX-Linux iyo MilagrOS.
GNURoot Debianwaa codsi rasmi ah oo ah «Android», waxaa laga heli karaa «Tienda de aplicaciones de Google para Android (Google Play Store)», markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo 3 August 2018, oo hadda ku jira noocyo kala duwan, iyadoo ku xiran nooca «Android» taas oo lagu rakibi doono, iyada oo aan la helin iswaafajin buuxda oo la hubo, laga bilaabo nooca 8.0 iyo wixii ka dambeeya.
Xaaladaha halka nooca «Android» aan ku habboonayn «GNURoot Debian» se lagu taliyay in la isticmaalo «UserLand», gaar ahaan haddii ay yihiin noocyo casri ah oo ka mid ah«Android», taasi waa, nooca 8.0 ama ka sareeya.
Asal ahaan, waxay u oggolaaneysaa ama awood u siinaysaa qoritaanka a«Terminal de Linux»leh ogolaansho«súper-usuario (root)», si loo fuliyo iyada oo loo sheegay «Interfaz de Línea de Comandos (CLI)», amarada amarka lagama maarmaanka ah, ka dibna rakibi a «Entorno de Escritorio» iyo wax kale «aplicaciones GNU» lagama maarmaan ah ama loo baahan yahay.
Waa «App» badanaa loo isticmaalo isku dhafan XServer XSDL, maadaama uu jiro mid kale, waxay mas'uul ka noqon doontaa oggolaanshaha muuqaalka sawirada kombiyuutarka Linux, taas oo ah, «Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)»Si kale haddii loo dhigo, waxay u ekeysiin doontaa kormeeraheena.
Isticmaalkeedu ma aha mid aad u dhib badan, maadaama mar kii ugu horreeyey la fuliyo, waa inaad sii wadtaa cusbooneysiinta «Sistema Operativo Linux» oo rakibi a «Entorno de Escritorio», doorbidayaa mid fudud oo fudud sida «XFCE» o «LXDE», iyo inta kale ee lagama maarmaanka ah. Ugu dambeyntiina, kor u qaad «GUI» del «Sistema Operativo». Marka la soo koobo, nidaamka caadiga ah ee la soo saaray ayaa u ekaan doona sidan:
Tallaabada 1 - Laga soo bilaabo GNURoot
Orod: apt-get update
Orod: apt-get install lxde
Orod: apt-get install xterm synaptic pulseaudio
U beddelo: XServer
Tallaabada 2 - Laga soo bilaabo XServer
Deji: Xallinta iyo DPI
Sug: Shaashad buluug ah
Ku noqo: GNURoot
Tallaabada 3 - Laga soo bilaabo GNURoot
Orod: export DISPLAY=:0 PULSE_SERVER=tcp:127.0.0.1:4712
Orod: startlxde &
Ku noqo: XServer
Tallaabada 4 - Laga soo bilaabo XServer
Sug: Shaashad buluug ah oo markaa baabi'i doonta
Arag oo isticmaal: Deegaanka Desktop-ka ayaa la rakibay.
Dejinta Linuxwaa codsi rasmi ah oo ah «Android», waxaa laga heli karaa «Tienda de aplicaciones de Google para Android (Google Play Store)», markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo 22 August 2019, oo hadda ku jira nooca 2.4.0 waana la heli karaa«Android» version 4.0.3 iyo noocyada dambe.
Barnaamijkan ee «código abierto»fududeeyaa rakibidda dhakhsaha iyo fudud ee a «Sistema Operativo GNU/Linux» on qalab mobile ah oo leh «Android». Maaddaama celcelis rakibaadda ay inta badan qaadato 15 daqiiqo.
Abuurayaasheeda waxay ku talinayaan in cabirka ugu yar ee sawirka diskka ah«Distro Linux» la adeegsado «GUI» waa 1024 MB (1GB) iyo la'aan«GUI» 512 MB (1/2 GB). Iyo in markii lagu rakibayo a «Tarjeta Flash» la socota «Sistema de archivos FAT 32», cabirka muuqaalku kama badnaan 4098 MB (4 GB).
Intaa waxaa dheer, waxay kugula talinayaan kadib rakibidda iyo qaabeynta bilowga ah, lambarka sirta ah«SSH» y «VNC» si otomaatig ah ayaa loo soo saaraa. Inaad awood u leedahay inaad ku bedesho xulashooyinka «Properties -> User password" (Propiedades -> Contraseña de usuario)» ama adeegsiga aaladaha caadiga ah «Sistema Operativo» la isticmaalay, taasi waa, amarrada «passwd» o «vncpasswd».
Codsigan sidoo kale wuxuu ku tiirsan yahay isticmaalka 2 barnaamijyo kale oo faa'iido leh, oo loo yaqaanBusyBox y VNC Daawade. Ahaanshaha kan ugu horreeya, xirmo qalab ah oo furaya aaladda moobaylka «Android» in la isticmaali karo dhowr «comandos de Linux» lagama maarmaanka u ah «Distros Linux» shaqee oo u socod si qanacsan. Kan labaadna, codsi desktop fog oo loo isticmaalo in lagu abuuro daaqadda taas oo ah «Distro Linux» waxay ku dhex socotaa aaladda moobaylka «Android».
Tallaabada 1 - Bixinta Linux
Ka dib markii la rakibo 3-da codsi, lana toogto «Linux Deploy» xuduudaha soo socda waa in lagu qaabeeyaa qaabkooda qaabeynta:
qaybinta: Xulo nooca Linux Distro si aad u isticmaasho
Karti u: Awood u yeelo adeegsiga Deegaanka Garaafka ah ee Linux Distro si loo isticmaalo
Nidaamka Nidaamka Sawirada: Xulo VNC
Deegaanka Maskaxda: Xullo nooca Deegaanka Sawirka ee Linux Distro si aad u isticmaasho
Width / height: Xullo lagu taliyay 1920 x 1080 ama ka sareeya kaniiniyada iyo 1024 × 576 ama 1152 × 648 ee taleefannada casriga ah.
Username: U qaabee Username-ka Linux Distro inuu isticmaalo
Furaha isticmaalaha: Ku hagoob Password-ka isticmaalaha 'Linux Distro' si aad u isticmaasho
Ku rakib ikhtiyaar: Rakiibintu badanaa waxay qaadataa dhowr daqiiqo, iyadoo kuxiran xawaaraha qalabka mobilada la isticmaalo.
Nidaamka rakibaadda wuxuu ku dhammaanayaa farriinta «<<< desplegar» badhanka ayaa la riixay «OK» waxayna ku egtahay sugitaanka fariinta la soo bandhigayo «<<< Start» ka dib tag arjiga ee «VNC». Ilaa heerkaan, the «Distro Linux» fulin iyo socodsiin.
Tallaabada 2 - VNC Viewer
Marka dalabku socdo «VNC Viewer», waa inaan ku darno xiriir cusub adigoo riixaya astaanta leh astaanta «+» dhinaca midig ee hoose, iyo xulashada cusub ee la abuuray oo la yiraahdo «Nueva conexión» ereyga waa in la galiyaa «localhost» sanduuqa qoraalka ee loo yaqaan «Address» iyo magaca aan dooranay sanduuqa qoraalka oo la yiraahdo «Name». Ugu dambeyntiina, waa inaan riixnaa badhanka la yiraahdo «Create» in la dhammeeyo.
Inaad maamusho «Distro Linux» waa inaan kaliya riixnaa kuweena xiriir cusub ayaa laga abuuray «VNC Viewer» in la ordo oo la isticmaalo.
Dhulka Isticmaalaha waa codsi rasmi ah oo ah «Android», waxaa laga heli karaa «Tienda de aplicaciones de Google para Android (Google Play Store)», markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay 12 August 2019, oo hadda ku jira nooca 2.6.2 iyo diyaar u ah «Android» version 5 iyo noocyada dambe.
Abuurayaasheeda ayaa sheeganaya inay siiso farsamo fudud oo lagu fuliyo a «Distro Linux» ama kaliya a«aplicación de Linux» ku saabsan «Android». Maaddaama ay u oggolaaneyso iyaga in lagu rakibo gudaha ama daruuraha. Intaa waxaa dheer, waxay bixiyaan adeegsi heer sare ah oo xoog badan «CLI» awood u leh in loo oggolaado rakibidda xirmooyinka, isku-darka fulinta, adeegsiga cayaaraha ku saleysan qoraalka, iyo waxyaabo kale oo badan.
«UserLand» la abuuray oo ay si firfircoon u hayaan dadka ka dambeeya abka «GNURoot Debian», sidaa darteed mustaqbalka dhow waxay noqon doontaa beddelka saxda ah ee isku midka ah noocyada cusub ee «Android».
Markuu bilaabmayo «UserLand» markii ugu horeysay, waxay soo bandhigeysaa liistada guud ee qaybinta Linux iyo codsiyada. Marka aad gujiso mid ka mid ah kuwan, taxane tilmaamo qaabeyn ah ayaa soo muuqanaya oo ay tahay in la qaabeeyo, si markaa kadib «Distro Linux» ama «aplicación de Linux» la soo dejiyo oo loo qaabeeyo. Hadana gadaal laga marin jiray loona adeegsan jiray Terminal ama Codsi Helitaanka Remote sida kuwii hore.
In kastoo, habka rakibaadda «UserLand» waxay ku talinaysaa isticmaalka «bVNC (Secure VNC Viewer)» sida codsi Helitaanka Fog. Iyo domain weyn oo ka mid ah codsigan casriga ah waxaad ka heli kartaa boggeeda rasmiga ah cinwaanka soo socda Dhulka Isticmaalaha.
Waxaan rajeyneynaa inaad kahesho qodobkaan mid waxtar badan u leh howshan soo jiidashada leh ee adeegsiga a «Distro Linux» ku saabsan «Android». Xusuusnow in ay jiraan barnaamijyo kale oo isla waqti isku mid ah qabtay shaqooyin isku mid ah, sida «DEBIAN noroot» mana ka sii firfircoon yihiin «Tienda de aplicaciones de Google para Android (Google Play Store)», laakiin waxaa jira kuwa kale oo badan oo aad isugu eg, ka fiican ama liita, oo aad sidoo kale u adeegsan karto wax yar oo cilmi baaris ah adoo marinaya waxyaabaha soo socda isku xirka.
Haddii aad waligaa ama hadda isticmaashay mid ka mid ah kor ku xusan ama kuwa kale, ha joojin faallo maqaalka sidaa darteed waxaad la wadaagi kartaa khibradaada qiimaha leh ee ku saabsan mowduuca bulshada oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Android: Codsiyada loo adeegsado Nidaamka Howlgalka Linux ee Mobilka
Cesar de los RABOS dijo
Android waa maalin Arbaco ah, waxay lamid tahay Windows oo la rakibay ... ad adag oo qashin buuxa, xididida taleefanka waa riwaayad oo si aad uhesho sheygan waa inaad isticmaashaa Windows!
Bakhaarku waa kan ugu xun, barnaamijyo badan, dhammaantoodna waa isku mid oo midkoodna midkoodna ma shaqeeyo.
Xaqiiqdii adeegsiga kernel-ka Linux kama dhigayo Linux laftiisa lafteeda.
Ku jawaab César de los RABOS
Fer B. dijo
Would .Waa faa iido badan hadii maqaallada ay taariikhaysan yihiin, maxaa yeelay ma garanayo haddii aan wax aqrinayo wax dhawaanahan ama laga joogo 4 sano ka hor.
Jawaab Fer B.
Salaan Fer! Maqaalkani wuxuu ku taariikhaysan 05/09/2019.
Mareykanku wuxuu Huawei siiyey 90 maalmood oo kale si ay howlaheeda u sii wataan
Turjumaanka Crow: Waa turjubaan fudud oo miisaan fudud oo loogu talagalay GNU / Linux